जुगलमा थोरै मतान्तर, बलेफीमा गोला | खुल्लापाना
खुल्ला पानासिन्धुपाल्चाेक २०७९ जेष्ठ १, आईतबार (१ महिना अघि) ६४९ पटक पढिएको
स्थानीय तह निर्वाचनमा भइरहेको मतगणनामा सिन्धुपाल्चोकका तीन वटा वडाको नतिजा रोचक बनेका छन् । जुगल गाउँपालिकाका नतिजा आएका २ वटै वडामा समान ७ मतान्तर रहेको छ भने बलेफी गाउँपालिकाको एउटा वडामा गोलाप्रथाबाट नतिजा आएको छ ।
जुगल गाउँपालिका वडा नं. १ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जनक तामाङ ५८४ मत ल्याएर विजयी भए । माओवादी समाजवादीको गठबन्धन विरुद्ध उभिएका लामाले गठबन्धनका उम्मेदवार कमल थापालाई ७ मतले पछाडी पार्दै जित आफ्नो पक्षमा पारेका हुन् । वडा सदस्यहरुमा थापाकै प्यानलका सदस्यहरु विजयी हुँदा तामाङ ७ मतले मात्रै कांग्रेसको एक्लो प्रतिनिधि बनेका हुन् । थापाले ५७७ मत मात्रै ल्याएका थिए ।
जुगलकै वडा नं. २ मा समेत ७ मतकै अन्तरले एमालेका चन्द्काजी लामा विजयी भए । नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार प्रताप लामासँग १ मतले मात्रै अगाडि परेपछि त्यहाँ पुनः मतगणना गरिएको थियो । पुनः भएको मतगणनामा लामाको ६ मत बढेर अग्रता ७ बन्यो । अन्तीम परिणाममा चन्द्रकाजीको ६१२ मत कायम भयो भने प्रतापको ६०५ मत रेकर्ड भयो । प्रताप निवर्तमान वडा अध्यक्ष हुन् भने चन्द्रकाजी निवर्तमान वडा सचिव हुन् । दुवैजना आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । सो वडामा वडा सदस्यहरू भने माओवादी केन्द्रबाट विजयी भएका छन् ।
बलेफी गाउँपालिकामा भने गोलाप्रथाबाट अध्यक्ष चयन गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका वडाअध्यक्षका उम्मेदवारहरूको समान मत आएपछि गोलाप्रथाबाट निर्णय गरिएको छ । दुवै उम्मेदवारको समान ४९५ मत आएपछि गोलाप्रथाबाट नेपाली कांग्रेसका छविलाल न्यौपाने विजयी बने । समान मत आएपनि माओवादीका पुरुषोत्तम सापकोटाको यो कार्यकालमा वडा अध्यक्ष बन्ने सपना अधुरै रह्यो ।